အောင်ထွန်းဦး: ကျုပ်နဲ့ ရန်ကုန်အထာ - ၃
ဒီလိုနဲ့ ဘုရားဖူးပြီးတော့ ကျုပ်တို့ ဘုရားကို တစ်ပတ် ပတ်ကြတယ်..။ ဆရာမလေးက
"ဦးအောင်ဘု..၊ ဓါတ်လှေကား စီးဖူးလား.."
"ဘယ်လိုဟာလဲ ဆရာမလေး..၊ ကျုပ် မျက်စိထဲမမြင်ဘူး.."
"လှေကားမလိုပဲ… အခန်းတစ်ခန်းထဲကနေပြီး..အပေါ်တက် အောက်ဆင်း လုပ်တဲ့ဟာကိုပြောတာ.."
"ကောင်းသားပဲ..၊ ကျုပ်လည်း ရွာကို ပြန်ပြောပြလို့ရတာပေါ့..၊ စီးချင်တယ်ဗျို့.."
"လာ လိုက်ခဲ့..၊ ဒီဖက်ကို…"
ကျုပ် ဆရာမလေးခေါ်ရာလိုက်ခဲ့တယ်..၊ ကျုပ်တွေးနေမိတယ်..၊ ကျုပ်နဲ့ ဆရာမလေး အခန်းထဲမှာ နှစ်ယောက်တည်း ဓါတ်လှေကား အတူတူစီးရတော့မယ်..။ အမှန်တော့ ကျုပ်က ဓါတ်လှေကား သိပ် စီးချင်တာ မဟုတ်ဘူးရယ်..၊ ဒါပေသည့် ဆရာမလေးနဲ့ အတူ နီးနီးကပ်ကပ်နေရမယ့် အခွင့်အရေး မှန်သမျှ ကျုပ် လက်လွတ်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလေ…။
"အဲ….ဒီမှာ လူတွေ ဘာလုပ်ဖို့ တန်းစီနေတာတုန်း..၊ ဆရာမ "
ကျုပ်အံ့သြသွားတယ်..၊ ဓါတ်လှေကား မစီးပဲ လမ်းလျှောက်သွားရင်ကို ဘာမှမကြာတဲ့ ဒီဟာလေးကို စောင့်နေတဲ့လူတွေက တစ်သီတစ်သန်းပါပဲလား..၊ သူတို့ တစ်ကယ်ပဲ လမ်းမလျှောက်ချင်လို့လား…၊ ကျုပ်လို ဓါတ်လှေကားပဲ မစီးဖူးလို့ စီးချင်ကြတာလား ကျုပ်သိချင်ပေမယ့် ဆရာမလေးကို မမေးဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး…။ နည်းနည်းကြာအောင် တန်းစီစောင့်ပြီးတော့
"ကဲ … ၀င်ရအောင် ဦးအောင်ပု…ပုဆိုးကို သေချာဝတ်ထား.."
"အသက်ကို ၀၀ ရှု "
"ပြီးတော့…၊ ကျွန်မ တိုးလို့ ပြောတာနဲ့ ရှင်ရှိသမျှအားနဲ့ ဓါတ်လှေကားထဲရောက်အောင် တိုးပေတော့..၊ ရှင့်နောက်က ကျွန်မ လိုက်လာမယ်.."
ရန်ကုန်မှာ ဓါတ်လှေကား တစ်ခါစီးဖို့ ဒီလောက်ခက်မှန်း ကျုပ်ခုမှ သိတော့တယ်ဗျို့..၊ ဒါ့ကြောင့်လည်း ကျုပ်တို့ရွာမှာ ဓါတ်လှေကားဆိုတာ မကြားဖူးတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..၊ ကျုပ်လည်း ပုဆိုးကို ပြင်ဝတ်၊ အသက်ကို ၀၀ရှု၊ လွယ်အိတ်ကို ရင်မှာပိုက်ပြီး….ဆရာမလေးရဲ့ အမိန့်ကို စောင့်နေလိုက်တယ်..။
ကျုပ် ရှိသမျှအားနဲ့ အသံငယ်ပါအောင် အသားကုန်ကြုံးအော်ပြီး ရှိသမျှအားနဲ့ တွေ့သမျှလူတွေအားလုံးကို သိမ်းကြုံးတိုးဝင်လိုက်တယ်..၊ ခပ်ကြီးကြီး ဖြစ်နေတဲ့ အမေမွေးထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ဒီနေရာမှာ အသုံးဝင်သဗျို့…၊ ပြီးတော့ ကျုပ်ရဲ့ တောသားအားက နည်းနည်း နောနောလည်း မဟုတ်ဘူးလေ…၊ ဒါတွေကြောင့် ဓါတ်လှေကားထဲကို ကျုပ် အရင်ဆုံးရောက်တယ်..၊ ပြီးတော့ ဆရာမလေး..၊ အခန်းထဲမှာ အသက်ပုံမှန်ရှုဖို့ ကြိုးစားရင်း လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဓါတ်လှေကားထဲကို ကျုပ်လိုပဲ အားကြိုးမာန်တက် ပြေးဝင်လာနေတဲ့ လူအုပ်ကြီး….
ဓါတ်လှေကားထဲက ထွက်ထွက်ခြင်း အသက်ကို ၀၀ရှုလိုက်သည်။ ဆရာမလေးရဲ့ ဓါတ်လှေကား မစီးခင် အသက်၀၀ရှုခိုင်းရခြင်းအကြောင်းကို ခုမှ သဘောပေါက်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ ဆရာမလေး ရယ်.. နို့မို့ဆို ဓါတ်လှေကားထဲမှာ တောသားတစ်ယောက် အီးမွန်းပြီးသေခြင်းဆိုပြီး ကြေးမုံထဲပါလာ မှဖြင့် ရွာမှာ အမေတို့ အရှက်ရစရာတွေ ဖြစ်ကုန်တော့မှာ..။
ဓါတ်လှေကားစီးရတာ ဆရာမလေးကတော့ ဘာမှမဖြစ်သလိုပင်..၊ အေးလေ..၊ စီးနေကျဆိုတော့ ဒီအီးအနံ့တွေလည်း ယဉ်နေလောက်ပြီပေါ့..၊ ဒီလိုတွေးမိတော့ နဂိုက လှနေသည့် ဆရာမလေးပင်လျှင် နည်းနည်းတော့ အကျဉ်းတန်သွားသလို…၊ အို……. အီးနံ့ယဉ်တာနဲ့ပဲ ဆရာမက အကျဉ်းတန်စရာလား….၊ ကိုယ့်စိတ်ကို ပြန်ဖြေတွင်းရင်း ဘုရားမုဒ်ဦးမှ လမ်းမဘက်ကို နှစ်ယောက်သား လျှောက်လာကြသည်။
လမ်းဘေးတစ်လျှောက် ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း လေးတွေကို ကျုပ်မြင်လိုက်ရတယ်..၊ ဘာတဲ့..၊ ၀က်ခြံဖျောက်ပေးသည်..၊ အာမခံတဲ့..၊ အံမယ်..၊ ကြွက်နို့..၊ ငါးမျက်စိ..၊ အသားပိုတွေပါ တစ်ထိုင်ထဲ ခွဲပေးတယ်ဆိုပါလား..၊ အမိုက်သားဟ..၊ ကျုပ်စိတ်ဝင်စားစွာ လမ်းဘေးက ကြော်ငြာတွေ ကို ငုံဖတ်နေတုန်းး..
"ဟေ့လူ..၊ ခင်ဗျားဗျာ..၊ ဒီလောက်ဖြစ်နေတာကို..ဒီတိုင်းပဲ..ထားတာလား.."
"အေးလေ..၊ ခင်ဗျားတစ်ယောက်ထဲရှိတာကို ခင်ဗျားမပြောလို့ ဘယ်သူ့ပြောရမလဲ.."
"ခင်ဗျား အသားအရေကို ကြည့်စမ်း..မည်းညစ်နေတာ.."
"အို..ဒါကတော့.. နေပူထဲ အသွားများလို့..."
"အဲ့ဒါ ညက ခြင်ထောင်မထောင်မိလို့.. ခြင်ကိုက်သွား…."
ပြောပြောဆိုဆို အဲ့ဒီလူက ကျုပ်ရဲ့ခေါင်းကိုဆွဲကိုင်ပြီး သူ့မျက်နှာနားတေ့ပြီး ကျုပ်မျက်နှာကို သေသေချာချာ ကပ်ကြည့်လိုက်တယ်..သူ့နှာခေါင်းနဲ့ကျုပ်ပါး ဘယ်လောက်ထိအောင် နီးကပ်နေလဲ ဆိုရင် သူ့နှုတ်ခေါင်းက ထွက်တဲ့လေက ကျုပ်ပါးကိုလာရိုက်နေတာကျုပ်သိတယ်..။ မသိရင် အာပွား ရှလူးတော့မယ့် အတိုင်းပဲ..လူကြီးက…။
"ကြည့်စမ်း..၊ ကျုပ်နဲ့တွေ့လို့…၊ ကျုပ်နဲ့သာမတွေ့လို့ကတော့ ခင်ဗျား…."
"တိတ်…ဒါခြင်ကိုက်ဖုမဟုတ်ဘူး…၊ ဒီအဖု တစ်ဖုကြောင့် နှလုံးတွေ ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်.ကလီစာတွေ ကြေမွပြီး.. လေးဖြန်း..ကိုယ်တစ်ခြမ်းသေ..ဆီချို၊ သွေးတိုး၊ ပန်းနာ၊ ရင်ကြပ်၊ AIDS၊ ၀ဠ်နာ ကံနာ..အနာကြီး..တွေဖြစ်နိုင်တယ်..."
"ဒါတောင် တစ်ချို့ရောဂါတွေ အလွတ်မရလို့…"
"ဒါဆို…ခင်ဗျာ့ မျက်နှာကျတော့ ဘာလို့ မည်းပြီး ၀က်ခြံတွေပွနေတုန်း…အဲ့သလိုလေးပဲ ဖြစ်သလိုလေး မေးလိုက်တော့မယ်…ဟွန့်…"
"အို..ဒါက ကျုပ် အသက်အန္တရာယ်နဲ့ ရင်းပြီး ခင်ဗျားတို့တွေ နမူနာ ကြည့်ရအောင် ထားထားတာ.."
"လာဒီနားတိုး.." ဆိုပြီး ကျုပ်ခေါင်းကို သူ့ ညာဖက်လက်နဲ့ ညှပ်လိုက်တယ်…။
"ဟင့်အင်း..၊ ကျုပ်မလုပ်ချင်ဘူး…" ဆိုပြီး ကျုပ်က ရုံးတယ်..၊ သူကလည်း လုံးဝကို မလွတ်ဘူး..၊ အသေကိုညှပ်ထားတာ…။
"မနာဘူး…ခဏပဲ…"ဆိုပြီး ဓါးလေး တစ်ချောင်းကို ထုတ်လိုက်ယ်..၊ ဓါးလေး က လက်ညှိုးအရွယ်လောက်တော့ ရှိမယ်..။ ဓါးကို မြင်တော့ ကျုပ်ပြာသွားတယ်…။
"ဟေ့လူ..ဟေ့လူ… ခင်ဗျားကြီး ကျုပ်ကို ဘာလုပ်မလို့နဲ့..ဓါးကြီးနဲ့…"
"အောင်မလေးဗျ..၊ မခြစ်ဘူး..၊ မခြစ်ဘူး..၊ ကျုပ်ကိုလွတ်..၊ အဟင့်..၊ ကျုပ်ကိုလွတ်..၊ အဲ့ဒါ ခြင်ကိုက်ဖုဗျ..၊ ခြင်ကိုက်ဖု…ဘာမှ ဓါးနဲ့ ခြစ်စရာမလိုဘူး…အဟင့်…အဟင့်.."
"မရှက်ပါနဲ့..၊ တစ်ခါတည်း ကိစ္စဖြတ်ပေးလိုက်မယ်…"
ကျုပ်ရုန်းတယ်..၊ လုံးဝကို ရုန်းလို့မရဘူးဗျို့..၊ လှုပ်ကို လှုပ်လို့မရတာ…. ဒီလူ့လက်က ဘယ်နှစ်ယောက်တောင် ချုပ်လာပြီး ကျင့်သားရနေမှန်းမှ မသိတာ…။ သန်မှသန် လက်က..။
သူ ကျုပ်မျက်နှာပေါ် ဗူးလေးတစ်ဗူးထဲက ဆေးရေတွေလောင်းချလိုက်တယ်…
"ဟေ့လူ … အဖုက..ဒီမှာဗျ… ခင်ဗျားဟာက နေရာတွေမှားနေတယ်…"
"သိတယ်..၊ နောက်ပေါက်မယ့်နေရာတွေပါ ကြိုတင်ရှင်းထားမလို့.."
ပြီးတော့ ဓါးနဲ့မျက်နှာကို အားရပါးရ ခြစ်တော့တာပဲ…။ ကျုပ်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေလူလို့ မှတ်ထားလိုက်တယ်…။ ကျုပ်စိတ်လျှော့လိုက်ပြီ…။ လူလည်း ဆက်ရုန်းလျှင် ဇက်ကျိုးရုံသာ ရှိတော့မည်။ လုပ်ချင်ရာသာ လုပ်ပါတော့ဗျို့…။
ဘယ်လောက်ကြာကြာ သူကျုပ်မျက်နှာကို ဓါးနဲ့ကောင်းကောင်းခြစ်နေသလဲတော့ မသိ…..
"ကဲ..ပြီးပြီ…. စင်းလုံးတော့ ချောမလာပေမယ့် နဂိုလောက်တော့ ကြည့်ရမဆိုးတော့ဘူးပေါ့…"
တော်သေးတယ်… ကျုပ် ၀ဋ်ကျွတ်ပြီ..၊ ကျုပ်သူ့လက်က အမြန်လွတ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်တယ်..။
"ဒါက ဘာလုပ်တာတုန်း..၊ ဆေးဖိုးပေးအုံးလေ…" ကျုပ်ခေါင်းကို သူ့လက်က မလွတ်သေးပဲ ပြောသည်။
"ဆေးဖိုးလေ..၊ ကျုပ်က ခင်ဗျား ဘိုးအေမို့လို့ အလကားလုပ်ပေးရမှာလား.."
"ခင်ဗျားကကျုပ် ဘိုးအေ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကျုပ်ဘယ်လောက်ပေးရမှာတုံး.."
"သုံးထောင်…၊ ဟိုဆေးပုလင်းယူသွားမယ်ဆိုရင် ၅၀၀၀"
"ဟင့်အင်း..၊ မလာဘူး..၊ ဆေးစွမ်းထက်မှာ..သိလား အခုကို မျက်နှာက ဖိန်းတိန်းရှိန်းတိန်းနဲ့..၊ မလာဘူး နောက်တစ်ခေါက်..လုံးဝမလာဘူး…သိလား...ဒါနဲ့ တစ်ခုလောက်မေးလို့ရမလား.."
"ဒီမှာ သုံးတဲ့ဟာ တွေက အသစ်လားဟင်..ရောဂါပိုးတွေ ဘာတွေကူးမှာစိုး……."
"အာ….. စိတ်ချ…၊ ဒီမှာ သုံးတာတွေက အကုန်အသစ်…."
"ဓါးလေးပဲ ဈေးကြီးလို့ အဟောင်းသုံးတာ…"
ကျုပ်ဘာမှ မပြောပဲ ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်…။ ကျုပ်ဘ၀တော့ သွားပါပီထင်ပါရဲ့ဗျာ..။ ဘယ့်နှယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် စိတ်ဝင်စားလို့ ကြော်ငြာလေးကြည့်မိပါတယ်..၊ လူကို ဆွဲဖမ်းချုပ်ပြီး မျက်နှာကို ဓါးနဲ့ခြစ်လွတ်လိုက်တယ်..။ တော်တော်ကို ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ ရန်ကုန်က လူတွေပဲ..။ ပြီးတော့ ဓါး..၊ ဘယ်နှစ်ယောက်တောင် ဒါမျိုး အလုပ်ခံရပြီးပြီလဲမသိ..၊ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ယောက်သာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဟိုရောဂါပိုး ရှိကြည့်..၊ ကျုပ်တော့ အသေ မလှဖြစ်ပြီ…။ အမေတို့လည်း မျက်နှာ ပျက်ရမယ်…။ ရွာကိုလည်း ဘယ်မျက်နှာနဲ့ပြန်ရပါ့…၊ ဟယ်…အောင်ဘု ရန်ကုန်သွားတာ ဟိုရောဂါနဲ့ ပြန်လာသတဲ့..ဆိုတဲ့ အသံတွေ ကြားရမှာ မြင်ယောင်သေး…။
"ဦးအောင်ဘု..၊ ရှင်ကလည်း ကြာလိုက်တာ..၊ နောက်မှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ.."
ဆရာမလေးက ကျုပ်ကို စောင့်ရတာ စိတ်မရှည်တဲ့လေသံနဲ့ပြောသည်။ နောက်မှ ဘာတွေ ဖြစ်နေလည်း သူမှ မသိတာကို အဟင့်…။
"ဘာ….. ဘာမှမလုပ်ပါဘူး..၊ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ကြည့်နေတာ.."
"မျက်နာတွေလည်းနီလို့..၊ ရှင်မလိမ်နဲ့..၊ အရက်သောက်လာတာလား.."
"အာ..၊ ဆရာမကလည်း..၊ကြံကြီး စည်ရာ..၊ ဒီမှာ အရက်ရပါ့မလားဗျ..၊ ပြီးတော့ ကျုပ်ကလည်း သောက်ပါ့မလား.."
"ဟုတ်သားပဲ…၊ ဒါဆိုရှင့်မျက်နှာကြီးက ဘာလို့ အဲ့လောက် နီနေတာလည်း…"
ဆရာမလေး ဘာမှ ဆက်မမေးတော့ပဲ ဂေါက်ဆတ် ဂေါက်ဆတ်နဲ့ ထွက်သွားခဲ့သည်။ ဆရာမလေး ကျုပ်ပြောတာကိုမယုံမှန်းကျုပ်သိတယ်..။ မတတ်နိုင်.. ကျုပ်မျက်နှာဓါးအခြစ်ခံရလို့ နီနေပါတယ်လို့တော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မပြောနိုင်…၊ သြော်… ရန်ကုန်မှာ နေတဲ့လူတွေ ဘယ်လိုနေ နိုင်ကြမှန်းကို မသိ…၊ သူတို့ဟာ သူတို့ကတော့ အဆင်ကိုပြေလို့…. ကျုပ်နဲ့ ရန်ကုန်ကတော့ ခုထိကို ဓါတ်မတည့် နိုင်သေးဘူး…ဟူးးးးးး…..။
ဒီလိုနဲ့ ဆရာမလေးနဲ့ ကျုပ်အပြန်မှာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ရေခဲမုန့်နဲ့ ဟမ်ဘာဂါ ၀င်စားကြတယ်..။ ဒါစားပြီးရင် ဆရာမက ကျုပ်ကို ဆူးလေဘုရားပို့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်..။ ဒီဆိုင်နဲ့ ဆူးလေဘုရားကို မိနစ် ၂၀ လမ်းလျှောက်ရင်ရောက်တယ်ဆိုတော့ ကားမစီးတော့ပဲ ကျုပ်တို့ လမ်းလျှောက်လာလိုက်ကြတယ်…။ လမ်းလျှောက်လာလိုက်ကြတာ ခဏကြာတော့ ကျုပ်ဗိုက်ထဲက မခံမရပ်နိုင်အောင် ထိုးအောင့် လာတယ်..။ ကျုပ်သိလိုက်ပီ..။ ကျုပ်ဗိုက်က စားနေကျဟာတွေ မဟုတ်ရင် ဒုတ်ခပေးနေကျ..။ ရေခဲမုန်နှင့် ဟမ်ဘာဂါတော့ ဒုတ်ခပေးပြီ…။ ကျုပ် ဗိုက်ထဲက တော်တော်ကို နာလာတာကြောင့် ကျုပ်ပုံပျက်နေတာကို ဆရာမ ရိပ်မိသွားသည်ထင့်..။
"ဒုတ်ခပဲ…မြို့ထဲမှာ ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ..၊ ရှင့်ဟာက အောင့်လို့မရဖူးလား.."
"ဆရာမ ဒီဒုက္ခမျိုး ခံစားဖူးရင် ကိုယ်ချင်းစာ တတ်ပါလိမ့်မယ်…"
ဆရာမလေး ဘာမှပြန်မပြော..။ ကျုပ်အထင် သူလည်း ဒီဒုက္ခခံရဘူးလို့ထင်သည်။ အေးလေ.. ဒီလောကမှာ ဒီဒုက္ခမခံရဘူးတဲ့သူတွေဆိုလို့… အိမ်သာစောင့်တွေလောက်ပဲရှိမှာ..၊ ဟုတ်တယ်လေ…၊ ပါချင်လာပြီလား..၊ တံခါးလေးဖွင့်ဝင်လိုက်ယုံပဲ.. ဒါတောင် တစ်ခါတစ်လေ လူကျရင် သူတို့တောင် စောင့်ရတာပ…။
ဆရာမလေးက စိတ်ညစ်တဲ့လေသံနဲ့ပြောသည်။ ကျုပ်ဘေးဘီကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။ ခမ်းနားလှပသော ရန်ကုန်မြို့လည်က ကျုပ်ရဲ့ဆန္ဒကို လှောင်ပြောင်နေသလို..။ မတတ်နိုင်.. ဒီကိစ္စကို ဆက်လွယ်ထားလို့တော့မဖြစ်..၊ ခုတောင် အံကြိတ်ပြီး အောင့်ထားရတာ...။
ကျုပ်နဲ့ အနီးဆုံးအဆောက်အဦ တစ်ခုကို ကြည့်လိုက်သည်။ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်တဲ့..။ ကျုပ် အပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ လှမ်းဝင်သွားလိုက်တယ်..။ ဆရာမလေးက စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ကျုပ်နောက်ကနေ လိုက် လာခဲ့တယ်..။
"အာ.. ဒီမှာ အဲ့လိုလုပ်လို့ မရဘူးလေ.."
"မတတ်နိုင်ဘူး.ဆရာမရေ.. ကျုပ်မှ မအောင့်နိုင်တော့တာကို..မဟုတ်ရင်..လမ်းပေါ်မှာ ထွက်ကျရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.."
ဆရာမလေး အသံတိတ်သွားသည်။ ဆရာမလေး အဲ့လိုတော့ ဖြစ်စေချင်ပုံမရ..။ သူပါ အရှက်ကွဲမှာလေ..။
ကျုပ်ခပ်တည်တည်ပဲ ၀င်သွားလိုက်သည်။ ဆရာမလေး ကျုပ်နောက်က လိုက်လာသည်။ အထဲမှာ အရမ်းကို ခမ်းနားသည်။ ၀န်ထမ်းကောင်မလေးတွေလည်း ၀တ်စုံတူညီလေးတွေနဲ့…ချောမှချော….။ ကျုပ်ဒါတွေ ဂရုမစိုက်အားတော့… ကောင်တာကို ခပ်တည်တည်ပဲသွားမေးလိုက်သည်။
ကျုပ်လည်း ခပ်တည်တည်နဲ့မေးပြီး ဓါတ်လှေကားဆီကို အမြန် လာလိုက်တယ်..။ ဆရာမလေး ကတော့ နောက်ကနေ ကြောက်ကြောက်နဲ့ လိုက်လာလေရဲ့..။ ကျုပ်ဓါတ်လှေကား ဘယ်လိုစီးရတာတယ် ဆိုတာ ခုနက ကြုံဖူးတာကြောင့် သိနေပြီ..။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာကတော့ စီးမယ့်လူတွေ မများပါဘူး… ဆရာမလေးရယ် ကျုပ်ရယ် နှစ်ယောက်တည်း..၊ ကျုပ် နံပါတ်ခြောက် နှိပ်လိုက်တယ်..။
ခြောက်ထပ်ရောက်တော့ တံခါးပွင့်ပွင်းချင်း ကျုပ် ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ကို လှမ်းမေးလိုက်တယ်..။
"ကျုပ်က အစည်းအဝေးလာတက်တာပါ..။ အိမ်သာသုံးချင်လို့ ဘယ်မှာလဲ မသိဘူးနော်.."
"ဟိုးဘက်ထောင့်ဆုံးအခန်းမှာပါရှင့်..။ ညာဘက်က အမျိုးသမီးပါ..။ ဘယ်ဘက်က အမျိုးသားပါ.."
ကျုပ်သူ့စကားဆုံးတာနဲ့ အမြန်ဆုံး အိမ်သာကို ပြေးထွက်လိုက်တယ်..။ ပြီးရင် ဆိုင်းပုဒ်ကို အမျိုးသားမှန်းသေချာအောင် ကြည့်လိုက်တယ်..။ ပြီးတော့ အိမ်သာဝင်ပြီး……………………….
ကျုပ်ပြန်ထွက်လာတော့ တစ်ကိုယ်လုံးမြှောက်နေသလို ခံစားရတယ်..။ ပေါ့ပါးပြီး လန်းဆန်းသွားတယ်..၊ ဆရာမလေးကတော့ ဓါတ်လှေကား အပေါက်ဝနားမှာပဲ ကျုပ်ကိုစောင့်နေလေရဲ့..။
"ပြီးပြီဗျို့..၊ လူကို လန်းသွားတာပဲ.."
"ဒါနဲ့နေပါအုံး..၊ ရှင့်ကိစ္စကို ဒီမှာဖြေရှင်းဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး..အကြံဥာဏ် ရလာတာလဲ.."
"လူက မဖြစ်မနေ အချိန်မျိုးကျရင် ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက် ဥာဏ်ပလက်တွေ အရမ်းထွက်တတ်ဗျ.."
ကျုပ်ပြောတာကို ဆရာမလေး နားလည် မလည်တော့ ကျုပ်မသိဘူး….။ ဘာမှတော့ ဆက်မမေးတော့..၊ ဒီလိုနဲ့ ခပ်တည်တည်ပဲ ကျုပ်တို့ ပြန်ဆင်းလာကြတယ်..။ အဆင်ကိုပြေလို့..။ ဘာမှ အခက်အခဲ အတားအဆီးမရှိ…။ မှတ်ထား…။ ရန်ကုန်မှာ ကျုပ်ကြီး ခံလာရတာ..။ ဒီတစ်ခေါက် တော့ ကျုပ် ပြန်ပြောနိုင်ပြီ…။ ရန်ကုန်က Trader ဟိုတယ်ကို အပျင်းပြေ အိမ်သာတက်ခဲ့တာ ငါကွ…။ ရွာရောက်ရင်တော့ ပြန်ကြွားနိုင်တော့မှာပ….။
ဒီ့နောက် ဆူးလေဘုရားကို အတူဖူးပြီး ကျုပ်တို့ အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြတယ်..။ ဒီနေ့ဟာ တစ်နေ့တာ ဆိုပေမယ့် ကျုပ်ရင်ထဲမှာ အမှတ်တရပေါင်းများစွာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်..။ သေချာပါတယ်.. ကျုပ်ဒီနေ့ ကို မေ့နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး…။ ကျုပ်ညမှာ ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး ပျော်ခဲ့တာတွေကို ပြန်စဉ်းစားပြီး အိပ်လို့တောင် မပျော်ဘူးဗျို့..။ ပီတိတွေဖြာ.. ရင်တွေခုန်နေပြီး .. တစ်ကယ်လို့ အိပ်ပျော်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် ကျုပ် ပြုံးပြုံးကြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်…။
အရင်ပို့စ်လေးတွေ ဖတ်ချင်ရင် >>>
ကျုပ်နဲ့ ရန်ကုန် အထာ ၁ - http://aunghtunoo.blogspot.com/2013/03/blog-post_16.html
ကျုပ်နဲ့ ရန်ကုန် အထာ ၂ - http://aunghtunoo.blogspot.com/2013/05/blog-post_5871.html
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 8:05 PM
တောသားလေး July 31, 2013 at 10:44 PM
Mr.tun August 17, 2013 at 1:57 AM
good tal ako
anzaw June 1, 2014 at 4:33 AM
ခပ်တည်တည်နဲ့နေတတ်တဲ့သူတောင် ရယ်နေပြီရှင့်။ သိပ့်တော်တာပဲရှင်။